Madaxweynaha “15-ka bishan waxaa furmi doona fadhigii u horeeyay ee Baarlamaanka cusub” | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweynaha “15-ka bishan waxaa furmi doona fadhigii u horeeyay ee Baarlamaanka cusub”
Madaxweynaha “15-ka bishan waxaa furmi doona fadhigii u horeeyay ee Baarlamaanka cusub”
Madaxweynaha xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 15-ka bishan uu furmi doono fadhigii ugu horreeyey ee Barlamaanka cusub, isagoo dhanka kalena ku baaqay in si deg-deg ah loogu gurmado dadka ay abaaraha saameeyeen.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo wariyeyaasha kula hadlayay Madaxtooyada ayaa ugu horeyn ka hadlay qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho, isagoo shacabka uga tacsiyadeeyay dhibaatooyinka ka soo gaaray, waxaana uu ciidamada ammaanka ku ammaanay doorka ay ka qaataan ka hor-tagida falalka amni darada
Xasan Sheekh ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku jirto dagaalami caalami ah, oo ka dhan ah Argagixisada, isagoo ugu baaqay shacabka inay ka qeyb qaataan dagaalkaas.
Madaxweynaha ayaa sheegay in markii u horeysay muddo 47-sanno kaddib ay doorashooyin ka dhacayaan, taasoo lagu gaaray bisayl siyaasadeed oo dadka Soomaalida ah ay sameeyeen, isagoo ku ammaanay dowlad gobolleedyada iyo guddiga arrimaha doorashooyinka ku howlahan sida ay u guteen waajibaadkooda.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in fadhigii ugu horreeyey ee Barlamaanka labada aqal ee cusub uu furmi doono sida qorshuhu yahay 15-ka bishan, gacantana lagu hayo howshaasi, isagoo faray maamulka Baarlamaanka in ay dadajintaan qabsoomidda kulankaasi oo ay dhaarinta xildhibaannada ay ka mid tahay.
Ugu dambeyn Madaxweynaha ayaa sheegay in gobolada dalka oo dhan ay ka jiraan abaaro xooggan, isagoo ku baaqay in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen.